भोलि देखि लागु हुनेगरि कुखुराको मासुको मुल्य भारी मात्रले घट्यो: यति सस्तोमा हुदै छ कारोबार ! – Dainiki Online
May 2, 2021 May 2, 2021 adminLeaveaComment on भोलि देखि लागु हुनेगरि कुखुराको मासुको मुल्य भारी मात्रले घट्यो: यति सस्तोमा हुदै छ कारोबार !
भोलि देखि लागु हुनेगरि कुखुराको मासु को मुल्य सोच्नै नसकिने गरि घट्यो कति हुने छ हेर्नुसपछिल्लो तीन महिनापछि बजारमा जिउँदो कुखुरा सहजरुपमा पाउन थालेकाले कुखुराको मासुको मूल्य घट्न थालेको छ ।
शनिबारदेखि जिउँदो कुखुराको मूल्यमा १० रुपैयाँ र तयारी मासुको मूल्यमा १५ रुपैयाँका दरले घटाएको पोल्ट्री संघका अध्यक्ष जगबहादुर बिसीले बताए ।
र यो पनि : यसरी हुन्छ कपालको तस्करी, केका लागि प्रयाेग हुन्छ काटेकाे केश
नयाँदिल्ली – दुई महिना पहिले भारत र म्यानमारको सीमाबाट जफत भएको मान्छेको कपालको मुद्दाले भारतको आन्ध्र प्रदेशको राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । उक्त कपाल तिरुमला तिरुपती देवस्थानम् (टीटीडी) बाट तस्करी भएको आशंका गरिएको छ ।
सामान्यतया मिजोरम क्षेत्रमा जंगली जनावर र सुन तस्करी हुने गरेको भए पनि पहिलो पटक १२० बोरा मान्छेको कपाल बरामद भएको हो । प्रत्येक बोरामा करिब ५० किलो कपाल रहेको जनाइएको छ ।
ट्रकसँगै पक्राउ परेका ड्राइभरले कपाल तिरुपति मन्दिरबाट ल्याइएको बताएका थिए । मारुयती नाम गरेकी एक महिलाले आफूलाई कपाल ओसार्ने ठेक्का दिएको ड्राइभरले बयान दिएका अधिकारीहरुले बताएका थिए ।
पहिले प्रत्येक महिना तिरुमलामा लिलामीमार्फत् मुन्डन गरिएको कपाल बिक्री गरिन्थ्यो । तिरुमलाबाट कपाललाई तिरुपतिको भन्डारमा लगिन्छ ।
त्यसपछि कपाललाई ५ श्रेणीमा विभाजन गरी रंग र लम्बाइका आधारमा लिलामी गरिन्छ । तर, अहिले तीन महिनामा एक पटक मात्र लिलामी हुने गरेको खुलेको छ ।
पछि उसले तस्करी गर्ने कम्पनीको नाम पत्ता लागेमा त्यसलाई कालोसूचीमा राख्ने बताएको छ । टीटीडीमार्फत् नै कपाल तस्करी हुने गरेको सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरुले दाबी गरिरहेका छन् । प्रहरीले टीडीपी पार्टी र अन्य केही व्यक्तिहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । बीबीसी हिन्दी
लुम्बिनीका प्रदेश मन्त्री भन्छन्- विमला वली अपरहणमा पर्नुभयो, प्रहरीलाई उद्धार गर्न भनेका छौं
नेपालमा आज ५ घण्टा विद्युत अबरुद्ध हुने,यी स्थानमा जाँदैछ लाइन ?